"Koa izay tafangona teo dia nanontany Azy hoe: Tompoko, amin'izao va no hampodianao ny fanjakana ho amin'ny Isiraely? 'Fa hoy kosa Izy taminy : Tsy anareo ny hahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny Ray amin'ny fahefany ihany.'" - Asa. 1:6,7.
Nitebiteby te hahalala ny tena fotoana marina hisehoan'ny fanjakan'Andriamanitra ireo mpianatra. Nilaza taminy anefa i Jesôsy fa tsy azon' izy ireo fantarina ny andro sy ny fotoana satria tsy nasehon'ny Ray azy ireo izany. Tsy ny zavatra manan-danja indrindra tokony ho fantatr'izy ireo ny fotoana tokony hampodiana ny fanjakan'Andriamanitra. Tokony ho hita manara-dia ny Tompo, mivavaka, miandry, miambina, ary miasa mandrakariva izy ireo. Tokony ho solontenan'i Kristy eto amin'izao tontolo izao izy ireo.
Izay nanan-danja ho amin'ny fanandramana kristianina mahomby tamin'ny andron'ny mpianatra dia manan-danja amin'izao androntsika izao ihany koa. "Fa hoy kosa Izy taminy: Tsy anareo ny hahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny Ray amin'ny fahefany ihany. Fa hahazo hery hianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo." Ary rehefa hilatsaka tamin'izy ireo ny Fanahy Masina, dia inona no tsy maintsy hataon'izy ireo? "Ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany" – Asa. 1:7,8.
Io no asa tsy maintsy anolorantsika tena koa. Tsy tokony hiaina eo am-piandrasana fotoana manokana mampientanentana isika, fa tokony hampitombo amim-pahendrena ny tombontsoa ananantsika ankehitriny, ka hanao izay tsy maintsy hatao mba hisy fanahy maro ho voavonjy. Tsy tokony handreraka ny herin-tsaintsika isika amin'ny famisavisana ny andro sy ny fotoana izay notendren'ny Tompo amin'ny fahefany ihany ka tsy nampahafantariny ny olombelona, fa tokony hilefitra eo ambany fifehezan'ny Fanahy Masina, sy hanao ny andraikitsika ankehitriny, ary hizara ny mofon'ny fiainana, tsy voaharoharo amin'ny hevitr'olombelona, amin'ireo fanahy mangetaheta ny fahamarinana.
Vonona mandrakariva i Satana ny hameno ny saina amin'ny tsangan-kevitra sy kajikajy izay hampivily ny olona hiala amin'ny fahamarinana ankehitriny, ka hanala azy tsy ho mendrika ny hitory ny hafatry ny anjely fahatelo amin'izao tontolo izao. — RH, 22 Martsa 1892.